Ny ady tsy ahia-mahatratra | NewsMada
Ny ady tsy ahia-mahatratra
Vaky ny ady? Na farafaharatsiny, mizara roa ny mpifanao ankolafiny, ankoatra ireo mihainohaino hoe maro anisa mangina. Andaniny, ny eo anivon’ny fitondrana sy ny akaiky azy na mpiara-dia aminy mbamin’izay mahita sy mahazo tombontsoa amin’ny ataon’ny mpiara-komana.
Ankilany, ny ety ivelan’ny fitondrana misy ireo miantso fifanatonana, fifampidinihana, fiaraha-mamaha olana eto amin’ny firenena… Inona? Tsy fandriampahalemana, kolikoly avo lenta, harem-pirenena gaboraraka, fivarotan-tanindrazana, fangejana ny fahalalahana maneho hevitra, fahantrana…
Hatramin’izay, miantso fitoniana sy fiaraha-miasa ho amin’ny fihavanana hoe fototry ny fampandrosoana ny mpitondra. Eo koa ny fampiandrasana ny fifidianana 2018. Raha tsy izay, fanakorontanana sy fanonganam-panjakana, atahorana mafy sy anasoketana izay mihetsika rehetra.
Efa samy niala nenina nampiaka-peo ny hery velona maro. Amin’ny fiaraha-mitady vahaolana io, amin’ny isan-tsehatra na fanorenana ifotony ny firenena sy ny repoblika. Teo ny sendikà, firaisamonina sivily, fiangonana, mpanao gazety, mpanao politika, vondron’olona ifotony…
Tsy mifankahazo ny resaka? Na sarin’ady sy ady vava no betsaka… Tonga amin’izao fiaraha-mivondron’ny hery isan-karazany izao ny raharaha, fa tsy ny mpanao politika ihany. Tsy nampoizina? Na tsy maintsy ho mitranga izao, raha misy ny minia manao bemarenina tsy laitra tenenina…
Ny ady tsy ahia-mahatratra? Izay heverina ho tsy inona, mety haningotra ny tena rehefa tsy tandremana. Mandoro ny famonoana na filalaovana afo, raha efa mby amin’izay saro-bonoina na sendra ny rivo-mitsoka. Mitsoka mankaiza tokoa izao ny rivotry ny tantara? Tsy andrasana ny tantara hitsara…
Tsy misy jamba toy izay minia mikimpy, na marenina toy izay manampin-tsofina. Mbola misy ny mampiombona? Ny fifampitokisana amin’izay farafahakeliny hahazoana mifanatona, miara-mitady vahaolana… Tsy faharesena na halemana ny fiaraha-midinika, na ady an-toerana na ady toerana.